Cabdi Xaashi: Ha La Ii Madax Baneeyo Arimaha Doorashaooyinka Gobolada Waqooyi – Heemaal News Network
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa qoraal uu u diray Madaxda dowladda ee muddo xileedkooda uu dhamaaday iyo dowlad Goboleedyada waxaa uu dalbaday in loo madax banaaneeyo Arrinta gobolada Waqooyi ee doorashooyinka.
Qoralka oo ka kooban laba bog ayaa waxaa lagu sheegay in aan wax tixgelin ah laga siinin shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee ka qabsoomay Dhuusamareeb Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi, waxaana lagu eedeeyay Madaxweynaha Muddo xileedkiisa uu dhamaaday iyo Xukuumadiisa inay dadaaal adag u galeen in aan laga hadlin arrimaha doorashooyinka Gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Soomaliland, isla markaana ay faafiyeen warar ay kamid yihiin inay heshiiyeen iyo in guddiga loo qeybiyay.
Sidoo kale qoraalka kasoo baxay guddoomiyaha Aqalka sare ayaa waxaa lagu soo bandhigay 4 Qodob oo muhiim u ah arrimaha doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal ee Gobolada Waqooyi ee Soomaliland, kuwaas oo kala ah.
1: In ay si madax banaan u maamulaan Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi habsami u socodka nidaamka doorashooyinka labada Aqal ee Gobolada Waqooyi si waafaqsan heshiiskii 17-kii September 2020.
2: Dejinta habraacyada gaarka u ah doorashada xubnaha labada Aqal ee Gobolada Waqooyi gaar ahaan kuwa Aqalka Sare.
3: Dhismaha Guddiga doorashooyinka & hubinta hirgelinta howlaha doorashooyinka heer waagaqsan nidaamka Guud ee doorashooyinka dalka .
4: Xulashada Goobta ay ka qabsoomeyso doorashada , hubinta amaankeeda iyo xaqiijinta in ay soo geli karaan dhamaan ergooyinka iyo musharixiinta tartamaya, Warbaahinta & Goobjoogayaasha.
“ Mudanayaal waxaan idinla socod siineysaa inaanu jirin wax heshiis ah oo laga gaaray arrimaha aan kor kusoo xusnay , sidoo kale aaney jirin laba dhinac oo reer Waqooyi ah oo isku haya doorashada, balse mushkiladu tahay qorshaha iyo damaca lagu raadinayo dib u soo noqoshada madaxweynaha taas oo sitoos ah uga hor-imaaneysa rabitaanka Guud ee ah in dadka Reer Waqooyi si madax bannaan u maamushaan doorashada sida Gobolada kale ee dalka.
Ugu dambeyn Qoraalka kasoo baxay guddoomiyaha Aqalka sare ayaa waxaa lagu sheegay in dadka kasoo jeeda Gobolada waqooyi ay xaq u leeyihiin diyaarna u yihiin inay ka qeyb-galaan oo taladooda ku biiriyaan kulamada dambe ee looga hadlayo xal u helida arrimaha ku gadaaman hirgelinta doorashooyinka dalka si ay ku dheehan tahay midnimo iyo Soomaalinimo.
Warkan kasoo baxay Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli guddiyada ka kala socda Dowladda Federaalka, dowlad Goboleedyada ee ku shiray Baydhabo ay shaaciyeen inay heshiis ka gaareen arrimaha doorashooyinka dalka.
Dhibanaal ka Cawday Dhul Boob Uu ku Hayo Maamulka Wardhiiglay Fariina U Dirtay Gobolka Banaadir.
Maareeyaha Hay’adda Waddooyinka Somaliland Oo Is Casilay.
Heemaall March 4, 2021